17 Jul,2020 BY uopyrector POSTED IN Activites
UOPY volunteers to care for COVID-19 patients
Volunteers at COVID-19 Medical Center, Yangon (Phaung Gyi)
A group of volunteers from the University of Pharmacy, Yangon spent one month and two weeks during May and June, 2020 to share the responsibilities of the COVID-19 Medical Centre, Yangon (Phaunggyi), Hlegu Township, Yangon Division, 50 miles away from Yangon. This group was composed of three academic staffs from the University of Pharmacy, Yangon and one post-graduate student, who is currently working at the Insein General Hospital.
16 Apr,2020 BY uopyrector POSTED IN Activites
Covid-19 အတွက် ‌ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ကာလဒါနအလှူ
“Covid-19 အတွက် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ကာလဒါနအလှူ”
ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့တွင် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆေးဝါးဗေဒဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူများ၊ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဟောင်းများ စုပေါင်း၍ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံမှ COVID-19 လူနာများအတွက် ရှေ့တန်းမှ တိုက်ပွဲဝင်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသော ဆရာဝန်၊ ဆရာမများနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအား နေ့လည်စာနှင့် အစားအစာ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သွားရောက်လှူဒါန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေများထဲမှ ငွေကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/- ကို မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနသို့လည်း ဒေါက်တာထက်ဖြိုးအောင်မှတဆင့် ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
20 Feb,2020 BY uopyrector POSTED IN Activites
UOP Sports Fun Fair 2020
ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ဒသမအကြိမ်မြောက် အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအခမ်းအနား
ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည့် ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်နှင့် စတုတ္ထနှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံသင်တန်း အသီးသီး၏ ဒသမအကြိမ်မြောက် အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ နှင့် ၂၁ ရက်နေ့များတွင် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ အားကစားကွင်းသစ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားတွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ဈေးရောင်းပွဲတော်များ၊ မြူးကြွလှပသော Performance များနှင့်အတူ နိုင်ငံကျော်တေးသံရှင်များဖြစ်သည့် မိစန္ဒီ၊ အောင်ထက်၊ Paul Austin၊ Junior Creative Dance Crew၊ The Rings တို့၏ မေတ္တာဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေမှုများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မမိုးစက်ဝိုင် (Miss Universe Myanmar 2013) မှလည်း ကျောင်းသား/သူများနှင့် ပျော်ရွှင်ရင်းနှီးစွာ Game ကစား၍ မေတ္တာလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
27 Jan,2020 BY uopyrector POSTED IN Activites
UOPY Fresher Welcome 2020
Visiting Lecture "Nanoparticle-mediated combination drug delivery systems for synergistic cancer treatment" 2/20/2020 12:43:41 PM
Visiting Lecture "Outcome-based Education" 2/19/2020 2:21:27 PM
Visiting Lecture about "Strategic Management in Healthcare" 1/30/2020 2:14:26 PM
Ceremony of signing extension of MoU between Faculty of Pharmacy, Silpakorn University and Universities of Pharmacy 12/20/2019 2:17:53 PM
Ceremony of Scholarship and Stipend awards by Dong A Socio Holdings Co. Ltd. 9/6/2019 12:59:48 PM
Visiting Program for Capacity Building on Pharmacy 9/6/2019 11:33:55 AM
RXSU international summer program 2020 7/10/2020 2:58:17 PM
Chapter End Test (13.1.2020) Marks of Second Year, B.Pharm. (1/2020) 1/31/2020 2:23:16 PM
RXSU summer program 7/8/2019 2:10:04 PM
Myanmar Universities' Research Conference 2019 7/8/2019 8:01:40 AM
Grade Credit Meeting 7/8/2019 7:05:49 AM
Reward 3/26/2016 2:28:10 PM
Address : University Of Pharmacy, Waibargi Road, North Okkalapa, Yangon
The University of Pharmacy (Yangon) is recognized by the government of the country for award of the pharmacy degree that allows the practice of pharmaceutical care in our country by graduate of the university;
Campus theme by Crystal Image • All Right Reserved © Crystal Image Co.,Ltd. www.crystal-image.biz •